ကြောက်ဖို့ ကောင်းတဲ့ အမွှေးတိုင် အန္တရာယ် အကြောင်း သိကောင်းစရာ…! – Shwe Yaung Lan
အမွှေးတိုင်မှ ထွက်သော အခိုးအငွေ့ များသည် ဆေးလိပ် ငွေ့ထက် အန္တရာယ် ပိုများပြီး ကင်ဆာဖြစ်နိုင် ။ ဟိန္ဒူ ဘာသာရေး ပွဲတော် များတွင် အသုံးများသော အမွှေးတိုင်မှ ထွက်သော အခိုးအငွေ့ များသည် ဆေးလိပ်ငွေ့ထက် အန္တရာယ် ပိုများပြီး ကင်ဆာ ဖြစ်ပွား နိုင်ကြောင်း လေ့လာမှု တစ်ရပ်က ဖော်ပြသည် ။
အမွှေးတိုင်မှ ထွက်သော အခိုးအငွေ့ များတွင် ကင်ဆာ ဖြစ်နိုင်သည့် အဆိပ်အတောက်များ ပါဝင်ကြောင်း တရုတ် သုတေသီ များ၏ လေ့လာမှု အရ သိရသည် ။ အမွှေးတိုင်မှ ထွက်သော အခိုးအငွေ့ များတွင် အဆိပ် ရှိသော အငွေ့ သုံးမျိုးပါဝင်ပြီး ဆဲလ်များကို မျိုးပြောင်းစေနိုင်ကြောင်း ယင်း လေ့လာမှု အရ သိရသည် ။
အမွှေးတိုင်မှ ထွက်သော အခိုးအငွေ့ များကို ရှူ မိပါက ယင်း အငွေ့များ အဆုတ် ထဲတွင် လှောင်ပိတ် မိကာ ရောင်ရမ်း စေသည် ။ ယင်း အခိုး အငွေ့များ တွင် ဒြပ် ၆၄ မျိုး ပါဝင်ပြီး အသက်ရှူ လမ်းကြောင်းကို အနှောင့် အယှက် ဖြစ်စေသည် ။
အမွှေးနံ့ များကြောင့် ခန္ဓာကိုယ် အတွက် အန္တရာယ် ဖြစ်စေပြီး ကင်ဆာ ဖြစ်ပွားနိုင်ကြောင်း လေ့လာမှု များက အတည်ပြု သော်လည်း အိန္ဒိယ နိုင်ငံရှိ အမွှေးတိုင် ထုတ်လုပ်သော ကုမ္ပဏီ များက ငြင်းဆို ထားသည် ။ အမွှေးတိုင်ကို အလုံပိတ် အခန်း ( သို့မဟုတ် ) လေဝင် လေထွက် နည်းသော အခန်းများ တွင် အသုံးပြုပါက အမှုန် အမွှား များ အသက်ရှူ လမ်းကြောင်းသို့ ဝင်ရောက်နိုင်သည့် အန္တရာယ် ပိုဆိုးရွားသည် ။
သို့သော် ယခု လေ့လာမှုကို အမေရိကန်နှင့် တရုတ် ဆေးရွက်ကြီး ကုမ္ပဏီများက ရန်ပုံငွေ ထောက်ပံ့ ထားပြီး ၎င်းတို့၏ ဆေးလိပ် လုပ်ငန်းသည် အမွှေးတိုင် များလောက် အန္တရာယ် မရှိကြောင်း ပြောဆို လိုသည့် သဘောသာ ဖြစ်ကြောင်း အိန္ဒိယ အမွှေးတိုင် လုပ်ငန်းများ အဖွဲ့အစည်းက ပြောကြားသည် ။
အမွှေးတိုင်ကို ဘာသာရေး အတွက် အဓိက အသုံးပြုပြီး ဆေးလိပ်ကဲ့သို့ ရှူရှိုက်ရန် မရည်ရွယ် သော်လည်း အမွှေးတိုင် အငွေ့များကို ရှူရှိုက်မိမှု များပြားကြောင်း သုတေသီ များက ပြောကြားသည် ။ အိန္ဒိယ နိုင်ငံသည် ကမ္ဘာ့ထိပ်တန်း အမွှေးတိုင် ထုတ်လုပ်သော နိုင်ငံဖြစ်ပြီး ဘာသာရေး အရ အမွှေးတိုင်သုံးစွဲမှု အများဆုံး နိုင်ငံ များတွင် ပါဝင်သည် ။
ကွောကျဖို့ ကောငျးတဲ့ အမှေးတိုငျ အန်တရာယျ အကွောငျး သိကောငျးစရာ…!
အမှေးတိုငျမှ ထှကျသော အခိုးအငှေ့ မြားသညျ ဆေးလိပျ ငှထေ့ကျ အန်တရာယျ ပိုမြားပွီး ကငျဆာဖွဈနိုငျ ။ ဟိန်ဒူ ဘာသာရေး ပှဲတျော မြားတှငျ အသုံးမြားသော အမှေးတိုငျမှ ထှကျသော အခိုးအငှေ့ မြားသညျ ဆေးလိပျငှထေ့ကျ အန်တရာယျ ပိုမြားပွီး ကငျဆာ ဖွဈပှား နိုငျကွောငျး လလေ့ာမှု တဈရပျက ဖျောပွသညျ ။
အမှေးတိုငျမှ ထှကျသော အခိုးအငှေ့ မြားတှငျ ကငျဆာ ဖွဈနိုငျသညျ့ အဆိပျအတောကျမြား ပါဝငျကွောငျး တရုတျ သုတသေီ မြား၏ လလေ့ာမှု အရ သိရသညျ ။ အမှေးတိုငျမှ ထှကျသော အခိုးအငှေ့ မြားတှငျ အဆိပျ ရှိသော အငှေ့ သုံးမြိုးပါဝငျပွီး ဆဲလျမြားကို မြိုးပွောငျးစနေိုငျကွောငျး ယငျး လလေ့ာမှု အရ သိရသညျ ။
အမှေးတိုငျမှ ထှကျသော အခိုးအငှေ့ မြားကို ရှူ မိပါက ယငျး အငှမြေ့ား အဆုတျ ထဲတှငျ လှောငျပိတျ မိကာ ရောငျရမျး စသေညျ ။ ယငျး အခိုး အငှမြေ့ား တှငျ ဒွပျ ၆၄ မြိုး ပါဝငျပွီး အသကျရှူ လမျးကွောငျးကို အနှောငျ့ အယှကျ ဖွဈစသေညျ ။
အမှေးနံ့ မြားကွောငျ့ ခန်ဓာကိုယျ အတှကျ အန်တရာယျ ဖွဈစပွေီး ကငျဆာ ဖွဈပှားနိုငျကွောငျး လလေ့ာမှု မြားက အတညျပွု သျောလညျး အိန်ဒိယ နိုငျငံရှိ အမှေးတိုငျ ထုတျလုပျသော ကုမ်ပဏီ မြားက ငွငျးဆို ထားသညျ ။ အမှေးတိုငျကို အလုံပိတျ အခနျး ( သို့မဟုတျ ) လဝေငျ လထှေကျ နညျးသော အခနျးမြား တှငျ အသုံးပွုပါက အမှုနျ အမှား မြား အသကျရှူ လမျးကွောငျးသို့ ဝငျရောကျနိုငျသညျ့ အန်တရာယျ ပိုဆိုးရှားသညျ ။ ။
သို့သျော ယခု လလေ့ာမှုကို အမရေိကနျနှငျ့ တရုတျ ဆေးရှကျကွီး ကုမ်ပဏီမြားက ရနျပုံငှေ ထောကျပံ့ ထားပွီး ၎င်းငျးတို့၏ ဆေးလိပျ လုပျငနျးသညျ အမှေးတိုငျ မြားလောကျ အန်တရာယျ မရှိကွောငျး ပွောဆို လိုသညျ့ သဘောသာ ဖွဈကွောငျး အိန်ဒိယ အမှေးတိုငျ လုပျငနျးမြား အဖှဲ့အစညျးက ပွောကွားသညျ ။
အမှေးတိုငျကို ဘာသာရေး အတှကျ အဓိက အသုံးပွုပွီး ဆေးလိပျကဲ့သို့ ရှူရှိုကျရနျ မရညျရှယျ သျောလညျး အမှေးတိုငျ အငှမြေ့ားကို ရှူရှိုကျမိမှု မြားပွားကွောငျး သုတသေီ မြားက ပွောကွားသညျ ။ အိန်ဒိယ နိုငျငံသညျ ကမ်ဘာ့ထိပျတနျး အမှေးတိုငျ ထုတျလုပျသော နိုငျငံဖွဈပွီး ဘာသာရေး အရ အမှေးတိုငျသုံးစှဲမှု အမြားဆုံး နိုငျငံ မြားတှငျ ပါဝငျသညျ ။
PREVIOUS POST Previous post: မီးပျက်ပြီး ပူပြင်းတဲ့ညတွေမှာ ကောင်းမွန်စွာအိပ်ပျော်စေရန် လုပ်သင့်သည်များ
NEXT POST Next post: ဇနီးဖြစ်သူဟာ မယားငယ်မဟုတ်ကြောင်း တုန့်ပြန်ဖြေရှင်းလိုက်တဲ့ ကိုဥက္ကာကျော်